သက်ကြီးပိုင်းတွေ ကားမောင်းတဲ့အခါ သိသင့်တဲ့အချက်များ - Hello Sayarwon
ကျွန်တော်တို့တွေ သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတာနဲ့အမျှ ကားမောင်းရတာလဲ တဖြည်းဖြည်း ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာရင် အမြင်အာရုံနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းလာတဲ့အလျောက် ကားကို ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကလောက် ချောချောမွေ့မွေ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မောင်းနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးမှာ သက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကားမောင်းနိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားမမောင်းသင့်တဲ့ နေရာတွေကို ရှောင်ပါ
သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ် တောင့်တင်းသန်မာမှုနဲ့ အလိုက်သင့်လှုပ်ရှားနိုင်မှု အားနည်းလာတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲ လမ်းပေါ်မှာ ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့ရမယ့် အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ ခဲယဉ်းသွားတတ်ပါတယ်။ သက်ကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မယ့် နေရာတွေမှာ ကားမမောင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဥပမာ အဝေးပြေးလမ်း၊ အရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်ရတဲ့လမ်း၊ အကွေ့အကောက်များတဲ့လမ်းတွေမှာ ကားမောင်းနှင်ခြင်းမပြုဘဲ လမ်းဖြောင့်ပြီးကျယ်တဲ့ နေရာတွေမှာသာ မောင်းနှင်သင့်ပါတယ်။ ရာသီဥတု မကောင်းတဲ့အချိန် (မိုးရွာ၊ နှင်းကျ၊ ရေခဲနေချိန်) တွေမှာလည်း ကားမမောင်းသင့်ပါဘူး။ ၎င်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေဟာ ကားမောင်းရ ခက်ခဲစေသလို သင့်အမြင်အာရုံကိုပါ အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် လမ်းချော်နိုင်တဲ့အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ မဖြစ်မနေ အပြင်သွားရမယ်ဆိုရင်လည်း ရာသီဥတုကောင်းလာမှ ကားမောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရထား၊ တက္ကစီ စတဲ့ အခြားယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ သွားတာက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သက်ကြီးပိုင်းတွေဟာ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ မျက်သားခြောက်ခြင်းစတဲ့ မျက်စိပြဿနာတွေ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ သင် ဝတ်နေကျ မျက်မှန်နဲ့ မျက်ကပ်မှန်တွေဟာ သင့်အမြင်အာရုံနဲ့ ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် မျက်စိရောဂါတစ်ခုခု ရှိနေခဲ့ရင်လည်း စောစောသိပြီး စောစောကုသမှု ခံယူနိုင်ပါတယ်။
သင်ကားမောင်းနှင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသံဗလံတွေကို ကောင်းစွာကြားရပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကားမောင်းနိုင်စေဖို့ သင့်အကြားအာရုံကိုလည်း ဆေးရုံဆေးခန်းမှာ သွားရောက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အကြားအာရုံ ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ကိရိယာတွေ တပ်ကောင်းတပ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကအသံတွေကို အလွယ်တကူ သတိပြုမိအောင် ကားထဲမှာ အသံဆူမနေအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
သင်သောက်နေကျ ဆေးဝါးများကို စစ်ဆေးပါ
အချို့သောဆေးဝါးတွေဟာ မူးဝေခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် ကားမောင်းရာမှာ အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင်သောက်နေကျ ဆေးဝါးတွေရဲ့ ဆေးညွှန်းကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဆေးညွှန်းမှာ ဆေးသောက်ပြီး ကားမမောင်းသင့်ကြောင်း ဖော်ပြထားရင် တိတိကျကျ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ ဆေးညွှန်းမရှိခဲ့ရင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ ခေါင်းထဲရီတီတီ ဖြစ်နေမယ်၊ အရက်နဲ့ ဆေးဝါးများရောပြီး သောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင် လုံးဝကားမမောင်းသင့်ပါဘူး။
သက်ကြီးပိုင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်စီစဉ်ထားတဲ့ ကားမောင်းသင်တန်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီသင်တန်းတွေက အိုမင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းအခြေအနေတွေပေါ်လိုက်ပြီး ဘယ်လိုကားမောင်းရမယ်ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းက သင့် ကြွက်သားနဲ့ အရိုးအဆစ်တွေကို တောင့်တင်းသန်မာစေပြီး အလိုက်သင့်လှုပ်ရှားရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသလို သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်းစတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်သလို ယောဂကျင့်ခြင်းဟာလည်း သင့်အတွက် ကောင်းကျိုးရလဒ်တွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းကို တတ်နိုင်သမျှ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာမှာ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ထိရောက်မှုရှိစေဖို့ သင့်တော်တဲ့ ရှူးဖိနပ်၊ အဝတ်အစား၊ စက်ဘီး စသည်တို့ကို အသုံးပြုပါ။
သက်ကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ ကားကို လိုတာထက်ပိုပြီး မြန်မြန်မမောင်းသင့်ပါဘူး။ ကားမြန်မြန်မောင်းတဲ့အခါ ရုတ်တရက်ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းကျော်လွှားဖို့ ခက်ခဲသလို မတော်တဆမှု ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရှိန်လျော့မောင်းခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အိုမင်းခြင်းကို ဘယ်သူမှ မရှောင်လွှဲနိုင်ပါဘူး။ သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါ ငယ်စဉ်ကလောက် ကောင်းကောင်းမမြင်နိုင်၊ ကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာ ဓမ္မတာပါပဲ။ အသက်ကြီးလာလေ ကားမောင်းရခက်ခဲလာလေဆိုပေမယ့် ဒီအချက်ကြောင့် ကားမောင်းခြင်းကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ရမယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကားမောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Adult Vision: Over 60 Years of Age. http://www.aoa.org/patients-and-public/good-vision-throughout-life/adult-vision-19-to-40-years-of-age/adult-vision-over-60-years-of-age?sso=y. Accessed January 27, 2017.
Older Drivers. https://www.nia.nih.gov/health/publication/older-drivers. Accessed January 27, 2017.
Tips for Safe Driving. https://nihseniorhealth.gov/olderdrivers/tipsforsafedriving/01.html. Accessed January 27, 2017.
4. Older drivers:7tips for driver safety. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/senior-health/art-20046397. Accessed January 27, 2017.